Bhora girenayiti kuSlättemossa | Shanyira Hultsfred
Bhora girenayiti kuSlättemossa
musha » Ona & ita » Zvinokwezva vashanyi » Tsika-nhoroondo nharaunda » Bhora girenayiti kuSlättemossa
Spherical granite idombo rakasimbiswa pakadzika zvakanyanya uye ndokusvika pamusoro panguva dzakapetwa pasi pevhu. Slättemossa ndiyo chete nzvimbo muSweden kwaunogona kuona yakasarudzika dombo mhando.
MuSlättemossa kune makomo maviri anoonekwa ayo ane mabhora egranite. Iwo akafukidzwa nechero imwe kana anopfuura matanda eime soda uye hornblende. Iyo nzvimbo pakati pemabhora izere negranite mass. Iro chando parakadzika makomo, chikamu chemuchinjikwa wemabhora chakazoonekwa. Zvinotaridzika kunge zviuru zvemeso zvakatarisana nevashanyi. Chikamu checalcareous soda chinoreva kuti mageologist anodanawo dombo ziso kukoshesa.
Pamakuva eJäreda pane muchinjiko-chikamu chebhora girenayiti block.
10 wongororo paGoogle
4/5 5 mwedzi yapfuura
Asina mwero asi akasarudzika muSweden.
4/5 gore rapfuura
Kwakanakisa kushanya kwekuenda kune avo vanofarira geology. Iyo chete inozivikanwa globular granite slab munyika. Asi yeuka kusiya sando yedombo kumba, iro dombo rakachengetedzwa. Yakawanda yacho iri pasi pemoss, asi iwe unogona kuona mashoma mativi emamitha ayo anotarisa kunze. Pini yemepu yakaiswa zvisirizvo, asi yakanyoreswa zvakanaka kuti ugone kuiwana zvakadaro.
3/5 gore rapfuura
Chiratidzo chakaiswa zvisizvo.
2/5 3 makore apfuura
Inonakidza kwazvo! Ndichaendako futi.
5/5 3 makore apfuura
Oo akanaka matombo!
2021-07-02T14:40:36+02:00Mabasa, Tsika-nhoroondo nharaunda|